Fire Emblem Heroes, lalao Nintendo vaovao azo amin'ny 2 Febroary | Vaovao IPhone
Fire Emblem Heroes, lalao vaovao an'ny Nintendo ho an'ny iOS azo alaina amin'ny 2 Febroary
Toa hanatanteraka ny fampanantenany i Nintendo. Taorian'ny fanombohana ny lalao pseudo-Miitomo sy ny Super Mario Run izay maro amintsika dia hangataka ny hanana toerana ambony kokoa ary tsy hikasika ny efijery fotsiny mba hahatonga an'i Mario hitsambikina, ilay mpamorona lalao Japoney nanambara ofisialy inona Fire Emblem Heroes hamely ny App Store sy Google Play anio 2 ho an'ny Febroary, na inona no mitovy, ao anatin'ny roa herinandro monja.
Fire Emblem Heroes dia lohateny izay manambatra kilalao milalao andraikitra amin'ny lalao paikady ary ampahan'ny tontolon'ny Fire Emblem izay hitantsika voalohany tao amin'ny console mitantara 8-bit Nintendo na NES tamin'ny taona 1990. Ireo mpampiasa dia afaka hampisondrotra ireo mahery fo rehefa miady amin'ny ady stratejika, izay, araka ny hevitro Mangataka amintsika bebe kokoa noho ny lalao Nintendo teo aloha izy izay nahatratra ny App Store.
Fire Emblem Heroes dia tonga ao anatin'ny roa herinandro
Araka ny lazain'i Nintendo, ny lalao dia hampiditra endri-javatra vaovao, ary koa a tohan-kevitra tany am-boalohany izay hifantoka amin'ny fanjakana miady roa izay mihabe ny fahasamihafana. Tsy maintsy mandray ny andraikitry ny mpampiantso isika, izay hiantso ny mpandray anjara isan-karazany avy amin'ny Fire Emblem handray anjara amin'ny ady epic.
Ny sarintany tsirairay dia ho toy ny solaitra misy efamira 8 × 6 natao hifanaraka amin'ny efijery misy ny fitaovana iPhone na Android. Ao amin'ity karazana tabilao ity izay tsy maintsy andraisan'ny mpilalao anjara amin'ny ady amin'ny tetika miaraka amin'ireo mpiray dina sy fahavalo maro.
Mba hahafahana hilalao araka ny tokony ho izy amin'ny smartphone, Nintendo manana novaina ny fanaraha-maso mba hahamora azy ireo, toy ny fitarihana mpiray dina mankamin'ny fahavalo hanafika. Hahatratra fandresena isika rehefa nesorina ny fahavalo rehetra tamin'ny sari-tany. Nilaza ilay goavambe Japoney goavambe fa na dia tsotra kokoa aza ny fanaraha-maso, ireo mpankafy ny andiany dia hahatsapa ho mahery fo ny Fire Emblem Heroes araka ny nantenain'izy ireo.
Toy ny Super Mario Run dia ho lalao ny Hero Emblem Heroes maimaimpoana amin'ny fividianana fampiharana, izay midika fa afaka mamoha votoaty sasantsasany isika amin'ny alàlan'ny fandoavambola manan-danja kokoa na fandoavam-bola bitika marobe izay hividianantsika entana ahafahantsika mivoatra haingana. Manantena aho fa rehefa mahatratra ireo fivarotana fampiharana ny Fire Emblem Heroes dia hanao izany izy raha hahazo tsikera tsara kokoa noho ilay zava-tsoa farany nataon'i Mario.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Fire Emblem Heroes, lalao vaovao an'ny Nintendo ho an'ny iOS azo alaina amin'ny 2 Febroary
Mankaleo ahy amin'ity karazana lalao ity .. Tsy afaka mahazo lalao maimaim-poana ve ianao? Izay ahafahanao mitantana ny toetra sns na aiza na aiza tianao 🙁
CBS Sports dia mandefa ny onjam-peony 24/7 ao amin'ny Apple Music any Etazonia
Stanford hamotopotorana ny fampiasana vaovao an'ny Apple Watch ho an'ny fahasalamana